Sims Hambayo Umhlahlandlela, amathiphu, Tricks, Aphambe uthole infinity SimCash, Zemali kanye Gems
Sims Ucingo aphambe
Veza ubuciko bakho ngenkathi ubuwena ukubonakala ezahlukene futhi bantu eziyingqayizivele Sims yakho, ebanikeza izici zabo ezihlukile ejabulela imfashini kanye zezinwele. Vele udale Sims yakho, ikhaya elihle kakhulu, ukukhetha imiklamo zakho ozithandayo kanye imihlobiso ngemininingwane kunanini efonini yakho. Jabulela zikhathi ezicebile futhi kumnandi yokuphila Simpsons yakho lapho bafinyelele imigomo yabo umsebenzi, ukufuna ukwenza izinto zokuchitha isizungu, ukuthuthukisa ubudlelwano, futhi sithuthukise indlela yabo yokuphila. Have fun nabangani, ukwenza othintana idolobha, khona nemicimbi ekhethekile, kunika stickers Sims eziyizintandokazi zakho. Yiziphi izindaba ingabe ukusho? Sims personalizes ukusebenza, zezinwele, zokubhukuda, ukwakheka kanye izesekeli. Kusukela ekupheleni ekupheleni kukhona amathuba engapheli! Khona-ke, ukuqoqa i ikhabethe ongenakulibaleka lapho ukusebenza nge Izzy Fabulous esitolo fashion. Ngayinye Sim, khetha izinhlamvu njengo- “Active” noma “Musical” bese wengeza ngenkathi Sims yakho uthole isipiliyoni sokuphila. Ukwakha Sims yakho ekhaya lapho ungathola konke ukuphila banganikeza. ngezifiso kalula imiklamo amacebo zokuhlala futhi ukhethe kusuka ezihlukahlukene ifenisha, Imishini, imihlobiso namaqoqo ngisho evumelanisiwe. Khona-ke, thatha Sims ukuthola izindawo amazing kanye ubuwena, ezifana studio imfashini, yokudlela futhi nightclub.
Gcina Ukuphila yakho Izindaba Ezivela Kubantu Efundelwe nokuzilibazisa ukuba nobudlelwano futhi imindeni. Nquma career okuthakazelisayo efana fashion designer futhi udokotela nokuzilibazisa like ukupheka nokudlala isiginci. Have ubuhlobo nobungane futhi yothando nabanye Sims futhi athathe izinyathelo okuyingozi like uzama ukuqabula noma benze iresiphi zokuhlola. Qala umndeni bese udala indlela ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo ngokuthumela amafa enamandla. Hlela futhi ahambele amaqembu namanye Sims lapho ungakwazi ukuxhumana futhi wamukele imiklomelo. Bonisa ikhaya lakho kumnandi, ukuthuthukisa ubudlelwano romantic ngisho ukukhetha ukuhambisa ne Sims abanye abantu. Vakashela nemicimbi ekhethekile ezifana Speed ??Ukuphola epaki noma Market Square Music Festival. Hlangana izinhlamvu zabanye abadlali emaphathini noma edolobheni bese usebenzisa stickers ukuze ubatshele kungakhathaliseki ukuthi amtoti, hot noma amangalisayo.
Uma usuphelelwe Sims Hambayo, injabulo kuzokwenza kube ukuhambisa up and down. Kufanele udale bese ufake uhlamvu yakho ngesisekelo ubulili nomzimba uhlobo. Nokho, kukhona izindlela ezimbalwa ukukhetha Sims yakho. Athi akhethiwe, isethaphu uzoqala.
lithathelwe Eyingqayizivele Sims
Akungabazeki ukuthi okomuntu siqu esijulile uzokwenza uhlamvu ayingqayizivele izogcizelela ungubani Sims yakho. Ungadlala futhi izame sims yakho kuzo zonke izindlela kunokwenzeka; Kusukela kwekhanda kukhethwa izicathulo une konke.
Ungakhetha kwekhanda ozikhethele, kanye nohlobo umzimba, ibala lesikhumba, umumo iso, ekhaleni ukuma, indlebe isitayela ngisho nokuphakamisa amashiya. Ungakwazi futhi ukukhetha izingubo ozikhethele, kuhlanganise izicathulo kanye izesekeli Sims yakho.
Ingasaphathwa lokuthi ngesikhathi mdlalo kuzokwenza uthola izingubo ngaphezulu futhi ungakwazi ukushintsha ukubukeka uhlamvu yakho uma izinguquko zakho ingqondo. Kufana ubuka iphupho lakho, kwesokudla?
Vula bese udala Sims ngaphezulu
Kumelwe ukhumbule ukuthi hhayi kuphela ngesikhathi adventure yakho uyosebenzelana nomunye Sim; Njengoba uthuthuka ngokusebenzisa umdlalo, izinhlamvu ngokwengeziwe futhi sims babelwa uma ikusasa lakho ifinyelela izandla zakho.
Yabela umuntu futhi wokuzilibazisa
Kuyini ethile ethakazelisa ngokukhethekile ukuthi ungakwazi futhi akwabele uhlamvu yakho noma uhlamvu Sims yakho. Angikwazi ukuba ophanayo, wokuvelela, nomdlandla, ujabule, okuhle, okudala noma umuntu onobuntu ezinhle ngokuvamile. Kuyinto isinqumo sakho; Kodwa ukuphila Sims yakho, kunjalo, kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi ukhetha. Ngaphezu kwalokho, Sims yakho bayokwazi wokuzilibazisa ukuthi nakanjani kube ezandleni zakho ukunquma. Khona-ke kuyoba ukuhlakanipha futhi abe creative!
Nge Online wethu Sims Ucingo aphambe Ithuluzi Uyokwenezela imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Sims Ucingo Ithuluzi izici:
Sims Hambayo - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-The Sims Ucingo inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Sims Ucingo Hack
Tales of the Rays aphambe, amathiphu, Tricks, Qondisa kanjani ukuthola infinity mirrogems futhi gald
Tales of the Rays aphambe
Tales wale misebe igxile namaqhawe amabili amajuba: Ix futhi Mileena, ikhaya lakhe libhujisiwe isivunguvungu Meteor. Laba bobabili zivela umugqa Mirrists, empi uliphakamisela amandla izikhali ukuthi abanike amandla akhethekile. Young njengoba benjalo, Ix futhi Mileena bazithola phambi impi ukusindisa izwe yabo futhi kumelwe sisebenzise ubuhlobo babo futhi amandla ngaphakathi kuwe ukuze uwine ke. Standard Japanese Ekwenza Umlingiswa Mechanics sisemsebenzini lapha: izikhali upgradeable, isipiliyoni amaphuzu, ezingeni inchubekelembili, namakhono iyashintsha. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ushintshashintsha uhlamvu zokubhukuda, ngokwezifiso amaqembu, bese uhola e-game lwemali ukuze “mema” izikhali ezintsha namaqhawe. Combat kuyinto umnyombo mdlalo futhi kwenziwa elula Swayipha / Izilawuli kampompi.
Hlola emigodini Lubanzi futhi imihlaba!
Thola RPG isipiliyoni esigcwele ngokuhlola amabalazwe emhlabeni, ayehamba emigodini egcwele umcebo futhi anqobe izitha ezinkulukazi!
A classic Tales isipiliyoni zamadivayisi eselula!
Dlala Tales kweqiniso RPG izici ezifana Linear Ukunyakaza Battle Uhlelo tindzaba lococelwe tona nobe ngokusebenzisa animations! Izikhangibavakashi nge heroes Ix futhi Mileena ohambweni lwabo ukusindisa izwe zabo!
Epic 3-D Isenzo Izilawuli ngokuzibonela!
I-3-D izimpi Tales uchungechunge manje kuma mobile! Jabulela izimpi ithokozisa nge Izilawuli elula elungiselelwe kumadivayisi eselula!
Lalela umculo kusuka esidlule Tales imidlalo!
Yizwa impi futhi ensimini amashuni kuchungechunge ukujabulela umhlaba nostalgic we Tales!
Isigaba imishini ikuvumela ukuhlomisa kuze kube izikhali okune nokungathandwa okukodwa esibukweni arte portrait uhlamvu yakho ukusebenzisa. Izikhali ukuthi zibhekene ngqo uhlamvu zabo bazisiza ukuba usebenzise amakhono abo hambisa ngesikhathi ukulwa. Ngokwesibonelo, esithombeni ngezansi, Enginakho izikhali ezimbili yakhelwe kuphela Repede ukuhlomisa futhi lokhu umenza zisebenzisa izinhlobo ezimbili ezahlukene ukuhlaselwa amakhono.
I-portrait uhlamvu ngaphezu izikhali kwesigaba limelela esibukweni yakho arte. Uma uhlamvu yakho ayinayo enye ayihlomele, ngeke ukwazi ukusebenzisa kuhlasela empini.
Isigaba ukubiza kule mdlalo ngokuthola izikhali namandla futhi esibukweni arte ekumeni abalingiswa yakho. lokubiza, udinga okungenani 20 amadayimane bakwazi ukubiza kanye. Diamonds kungenziwa ukuthola by izimfuno kokuqeda futhi izivumelwano.
Ukuze umdlalo yakhelwe kumadivayisi eselula, imvelo kanye uhlamvu onobuhle sihle. Uma ungazange wazi lokhu kwaba umdlalo mobile, okungenzeka ukuthi udidekile ke njengoba olandelayo isitolimende labalulekile eluLwimi Tales uchungechunge. Isikhathi Ngachitha ukudlala njengoba Repede wasikhumbuza isikhathi lapho ngidlalela abaninikhaya Tales Vesperia kuyona i-Xbox 360.
Omunye anezele mnandi kule mdlalo ikhono ukushintsha ukubukeka uhlamvu ngamunye nge izingubo ezahlukahlukene kanye izesekeli. Kukhona futhi isikhali nesigubungelo sezikhumba zamahlengezi esiphezu kuzoshintsha ukubonakala indlela ngayinye yawo ubukeka. Uhlelo lwemali ngokwezifiso libizwa nezibhebhe futhi ingatholakala ngokugcwalisa izinkontileka kulo mdlalo.
Nge Tales yethu Online yethuluzi Rays aphambe Uyokwenezela imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Tales izici Rays Ithuluzi:
Tales of the Rays - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Intuthu Unlimited Crystal
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku Tales of the Rays inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Tales of the Rays Hack
Cat Condo Game Guide, amathiphu, Aphambe uthole infinity zemali kanye level up
Cat Condo Game Tips aphambe
Yakha siqu ikati Condo yakho bese usigcwalise nabo cute ubuka Elisengozini abangane! Qala umsebenzi wakho kuqala umdlalo njengoba kuyoba akucele ukuvula ibhokisi evunyelwe phezu kwalo, okungukuthi uma uzobe ukuphinda inqubo nokuthola amakati amabili ngesikhathi esisodwa kumathebula ezimbili. Zikhathi zonke, uthola amakati amabili yohlobo olufanayo, kufanele wazi ukuthi bangabizwa ehlangana ndawonye. Yenza lokhu udedele namakati ndawonye. Lena indlela eyisisekelo ukuze uthole izinhlobo ezintsha zezinto eziphilayo ikati emkhayeni wakho. Ingxenye eyalandela yalolu isibuyekezo izobamba Imininingwane ngendlela eziningi kakhulu ezibaluleke futhi kuyokusiza ukuba sifinyelele kwi ithrekhi impumelelo!
Gcina Condo lakho eliphelele
I amakati Cat Condo ukukhiqiza izinhlamvu zemali ngokuhamba kwesikhathi. I amakati ngaphezulu une, zemali ngaphezulu you khiqiza. Ukushiya izindawo ezingenalutho kuzosho wena uphuthelwa kweliholo. Udinga eziningi zemali ukuze athenge amakati okwengeziwe, ngakho-ke, kunengqondo ukuthi ukugcwala Condo yakho kakhulu ngangokunokwenzeka, ngisho uma kuphela ezingeni 1 amazinyane. Ungahlala nje ukubahlanganisa kamuva ukuze kube nendawo enkudlwana for izinhlobo ezingavamile.
Lo mdlalo inikeza izinzuzo ezahlukene esenana ukubuka ividiyo izikhangiso. Okokuqala, ungakwazi kabili ezisuka emholweni wakho ngaphandle kwe-intanethi noma namukele isikhangiso phezu egawula e. Okwesibili, ungase futhi kabili umholo wakho amahora amabili ngokubuka esinye isikhangiso. Ekugcineni, ungathuthukisa uhlobo ikati oyithola ibhokisi isipho ngokuvuma elinye ithuba isikhangiso. Ungawasebenzisa la izinto ukuze bathuthuke ngokushesha kulowo mdlalo. Uma ngokuphelele zonda ukubukela izikhangiso, nje ushiye ke ukudlala futhi wenze okunye noma umzuzu okuthile. Ungakhohlwa Ukuvula uxhumano lwe-device yakho njengoba udinga internet uxhumano ukubuka izikhangiso.
Usebenzisa imali yakho ezintweni amakati
Akukho zemali iphuzu hoarding - bayazivikela ezenziwe sisetshenziselwe ukuthenga okusezingeni eliphezulu ezingeni amakati, ngakho-ke qiniseka ukuthi ngaso sonke isikhathi ukwenza lokho uma nithola ithuba. Intengo ukuthenga ezingeni ikati ethize kwandisa emva kokuthenga omusha ngamunye, ngakho ekugcineni ngeke kube yimpumelelo kodwa kubize ukwenza kanjalo, kodwa kuze kube yileso sikhathi kufanele uthenge amaningi ngangokunokwenzeka. Ngivame ukuthenga emhlabeni 20 amakati (noma ngezinye izikhathi ngisho nangokwengeziwe) lizinga ethize ngaphambi kokuthuthela olandelayo. Lokhu nje kwenza kube lula kakhulu ngawe ukuba uthole ukuthi amakati ezingeni eliphakeme ngokushesha, kodwa into awutholakali kusukela ngokuhlanganisa ezingeni amakati ephansi kakhulu. Ngakho uma ufuna ngempela ukulondoloza imali, uhlela ngokuthenga enkulu ezayo, ungenza lokho kanye.
Ukwandisa izinga amabhokisi uthola
Ngeshwa, ungakwazi kuphela ukwenza lokhu ngokumemezela uvula isici ngokuchitha imali yangempela umdlalo, kodwa uma ukujabulela Cat Condo, kungokuthile nalokho kwenele ukwenza njengoba kuzoba lula ukuphila kwakho okuningi, noma ngabe nje ekutholeni izinga extra ibhokisi ngalinye. Ngaphandle kwalokho, asikwazanga ukuthola aphambe yangempela umdlalo, kodwa thina vele asathungatha uma sibathola, sizoqinisekisa ukuhlela lesi sihloko futhi wabelane ngokuthola kwethu nawe. Njengoba ngishilo ekuqaleni oku, asikho ngempela kakhulu ukukusiza ngokwezinhlinzeko isu Cat Condo, kodwa zonke bit extra kusiza ngethemba.
Cat Condo Ithuluzi izici:
Cat Condo - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-Cat Condo inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Cat Condo Hack
Marvel Strike Force Umhlahlandlela, amathiphu, Ithuluzi aphambe Engeza infinity Amandla Cores, Igolide naMandla
Marvel Strike Force Umhlahlandlela, Interesting
Umdlalo uqala nge okokufundisa lapho uya ufunda ngabantu eziyisisekelo umdlalo; Nick Fury likuqondisa kulo okokufundisa. Ngo okokufundisa, ekutshela mayelana umsebenzi umdlalo, roasters / izinhlamvu / namaqhawe, orbs, kanjani ukuhlasela, usebenzisa amakhono, ukuqeqeshwa of izinhlamvu, nokunye okuningi.
ekuqaleni, e Marvel Strike Force, une-Spider-Man, isihlangu Medic, Luka Cage ethimbeni lakho. Umdlali iqala umdlalo kusuka umkhankaso Imodi, umkhankaso imodi iyona isihluthulelo sokuvula zonke ezinye umdlalo izindlela Marvel Strike Force.
Abalingiswa e Marvel Strike Force
Zibonisa izinhlamvu zakho ozithandayo, nakhu uhlu eyinhloko izinhlamvu / roasters e Marvel Strike Force:
U-spider man, LukeAge,Punisher, Elektra, isihlangu Medic, isihlangu Trooper, Hulk, Black Widow, Hawkeye, A.I.M. Assaulter, Orax, uCaptain Melika, Bullseye, crossbones, daredevil, Gamdra, Hand Assassin, Hand Blademaster, Hand Archer, Indoda yensimbi, Iron Fist, Jessica Jones, kwelokuvukela umbuso wase, Korath babaxoshayo, Kree Noble, Nebula, Nicky Fury, rocket Racoon, Thor futhi abaningi.
Ngakho Marvel Strike Force izici bonke abalingisi bakho abayizintandokazi, kodwa okudingayo ukuthi uvule futhi kwakuzothatha isikhathi esiningi.
Marvel Strike Force Umhlahlandlela
Uma usaqala futhi kudida, ke lokhu umhlahlandlela Marvel Strike Force umdlalo usizo wena uzokwazi ukudlala umdlalo like a pro!
Roasters / Heroes / Izinhlamvu Umhlahlandlela
Ngo-Marvel Strike Force, kufanele ukhethe namaqhawe kangcono izimpi. Zimbili izinhlobo izinhlamvu; amaqhawe kanye villains. Awukwazi ukukhetha villain izinhlamvu e iqhawe izimpi futhi okuphambene nalokho.
Kanjani ukuze uthole izinhlamvu amasha e-Marvel Strike Force? Ukuze athole izinhlamvu ezingaphezu, udinga ukuvula orbs, thola shards noma ukuthenga kusuka esitolo.
Ungase ube eziningi namaqhawe ethimbeni lakho, ukukhetha labo roasters ngoba impi abanale amandla aminingi ukudlula abanye.
Amandla - esetshenziswa amazinga ukudlala
Igolide - esetshenziswa ukuqeqeshwa heroes e Marvel Strike Force
Amandla Cores - esetshenziswa ukuthenga igolide, orbs, futhi izinto eziningi
Orbs - ukuze uvule izinhlamvu futhi izinto eziningi; ikhono izinto, ukuqeqeshwa amamojuli njll.
Njengoba uthuthuka, uthola imivuzo evela imithombo eminingana, amandla pack sakho inyuka.
Abalingiswa zihlukaniswe ngezigaba. Ngokwesibonelo; Spiderman ingakhethwa uma enilwa e iqhawe izimpi, idolobha, bio, futhi brawler. Ungahlola izici iqhawe; ikhanda esigabeni roaster, shaya iqhawe, ngakwesokunene, sibheke izici. Ngakho ezinye izinhlamvu kungenzeka lingatholakali impi ngenxa izici komkhawulo.
Amakhono & Onekhono
Ngo-Marvel Strike Force, amakhono & namakhono heroes kuyisihluthulelo ukunqoba. Ngaphandle usebenzisa amakhono & amakhono, awukwazi uwine izimpi. Lamakhono noma amakhono elisetshenziswa impi ngoba umonakalo ephakeme, kuhlasela, ukwandisa amandla impilo, I-esilayidi njll. Ungavula amakhono ngaphezulu iqhawe ngcono uhlamvu yakho ukuze isihlanganisi esiphezulu futhi ukwandisa izinga amakhono kanye namakhono usebenzisa amakhono isithuthukisi impahla.
Hlanganani squad wakho
Athole ukuthi isimangalo sakho amandla futhi yakha squad ezinamandla Marvel Super Heroes futhi Super Villains like Iron Man, uCaptain Melika, Loki, Elektra, uDkt. Strange, Venom nokuningi.
Play omunye kakhulu emangalisa zibukeke imidlalo mobile ezake ezikhishwe of. Marvel Super Yakho Heroes futhi Super Villains bheka eduze nokuphila ngangokunokwenzeka kwesokudla efonini yakho!
Ubani wena ulethe izindaba ukulwa. Pair up ukhetha Heroes Super kanye Super Villains futhi enze combo liya athathe izindimbane izitha. Isazi e-mpi amacebo e 5v5 izimpi akunike amandla ukuzinqoba le amashinga kunazozonke Marvel Universe.
Experience phansi kuphulwa game play Cinematics, njengoba namaqhawe akho yilo ashukumisayo uchungechunge combos onompompi owodwa.
Amandla ngokusebenzisa ukuziphendukela kwemvelo
Ngubo futhi uthuthukise Heroes yakho Super kanye Super Villains ukuze abe namandla kunanini ngaphambili.
Nge Online Marvel yethu Strike Force aphambe Ithuluzi Uyokwenezela imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Marvel Strike Force Ithuluzi izici:
Marvel Strike Force - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Unlimited Amandla Cores
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-Marvel Strike Force inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Marvel Strike Force Hack
DawnBreak I Flaming uMbusi aphambe Ithuluzi, Interesting wengeze infinity Diamonds kanye zemali
DawnBreak I Flaming uMbusi Interesting
Lapho uSuku Kwelanga efika, walininda wabonakala, futhi kusukela esibhakabhakeni, intokazi ongaqondakali owehla ... Joyina Haley, Anis futhi uLuka uhambo oludumile futhi sicacise ikusasa labo!Dawn Break liyabukeka mobile RPG umdlalo ubona ubhekana off izitha ezithandekayo ithumela nawe ku adventures.And umxhwele silapha ukwenza isipiliyoni njengoba kujabulise ngangokunokwenzeka ngokwabelana kweqembu Dawn Break: I Flaming uMbusi aphambe namathiphu e isu lethu eliphelele guide.Even noma engalethi kakhulu ngokuya emisha, zikhona ezinye zezindlela esingase sisetshenziswe ukwenza kangcono futhi uthole izici, kumelwe siqiniseke ukuthi wazi about.And yize kulo mhlahlandlela ikakhulukazi okuhloswe ngazo abadlali saqala, abengeziwe abayizithulu eziphambili ingase ibe into eyodwa noma ezimbili ukuze ufunde, ngakho kungani asiphumelelanga ke ubone ukuthi kunjalo?
Ngakho ake Ungadlali a yesibili eyodwa futhi esikhundleni ake ubheke amanye Dawn amathiphu Break namasu ngezansi!
Uma uthanda ukwenza yonke into ngokwakho, kusukela ukuthi indlela kumnandi ukudlala Dawn Break: I Flaming uMbusi, kufanele akhokhe eningi ukunakekela combos.You kusebenze kubo ngokuhlanganisa 1, 2, 3 noma 4 ukuhlaselwa eziyisisekelo nge ukuhlaselwa B kanye isikhathi ngasinye umphumela different.The into ezithakazelisayo wukuthi ukuhlasela ngokwabo ziyahlukahluka futhi ngezinye izikhathi combo aphansi kubangela umonakalo ngaphezulu (noma umonakalo endaweni okungenani ngaphezulu) ngaphandle ephakeme one.Make Qiniseka ukuhlola bonke combos nemiphumela yabo ukwazi azoyisebenzisa empini.
Ukuqoqa konke okukhona nsuku zonke
Kunezindlela eziningi freebies ukuthi Dawn Break linikeza abadlali bayo nsuku zonke futhi kufanele uqiniseke ukuqoqa bonke ukuze sithuthuke faster.Complete ohambweni, ukuqoqa log e amabhonasi, hlola izenzakalo ... qiniseka ukuthi yezinto zokuqala ongayenza uma ungena ku-lo mdlalo ukuqoqa wonke la goodies.They ungeze ngokushesha futhi kukusize uthole okuningi ngokushesha.
Auto ugcwalise zonke izimpi ngaphambilini kuphelile
Manje lena isici Ngilithanda: ngaphambi kokuqala impi uke useqede, ungakwazi uphawu ebhokisini ukuthi ufundisa umdlalo ngokuzenzakalela ukudlala impi ngokuphindaphindiwe. Ngakho konke onakho ukwenze ukuze sivale ishaja yakho bese ukuvumela AI ukusingatha lesi sici rest.This kuyasiza kakhulu uma ufuna level up namaqhawe akho: kuthatha isikhathi, kodwa kuzokwenziwa futhi njengoba awudingi ngempela yini ukwenza noma, kuhle. Lokhu kusindisa nawe yokululama up potions for new heroes ukuthi uvule futhi ngale ndlela ungakwazi ngokushesha uzithola ukuma phezulu uma ukuwavula. sici enhle ngempela!Futhi, lokhu kuyasiza uma ufuna ukulima into ethize noma zama kaningi ukuthola shard iqhawe. Vele kusebenze ngokuzenzakalela ephelele futhi sewulungile (inqobo nje uma amandla).alternately, nge ohambweni ukuthi useqede, ungakwazi Insta-raid ngaphandle oya empini uqobo. Nokho, esimweni esinjalo, namaqhawe akho ngeke bathole isipiliyoni, kodwa ngeke namanje ukunqoba ezinye potions XP endleleni. Uma une isikhathi Nokho, kungcono nakanjani kangcono isipiliyoni ohlakaniphe ukudabula izimpi ngokwabo.
Shintshela namaqhawe for element ibhonasi
Futhi qiniseka ukuthi ngaso sonke isikhathi unake izingxenye izitha. element ngayinye muhle ngomunye futhi ebuthaka ngokumelene yesithathu, ngenkathi Purple Orange khansela nomunye out.This Yingakho kukuhle ukuba amaqhawe izakhi ezahlukene ukusetha kwakho futhi njalo banake lokhu: wazi izakhi izitha ngaphambi kokuya impi, ngakho-ke kungekho nzima ukwenza izinguquko ezidingekayo ukuze uthole inzuzo.
Indlela ukushintsha umbono ikhamera
Uma kwenzeka ufuna ukushintsha umbono kancane, ungakhohlwa ukuthi ungenza kanjalo: nje chofoza isithonjana iso phezulu kwesokunxele kanye usumi ngomumo. Bangu 3 engeli lehlukene ungakhetha futhi mina mathupha uthanda yesibili.
Engeza abangani asebenzayo okuqinile ukwesekwa namaqhawe
Ukungeza abangane kule mdlalo kubaluleke kakhulu, njengoba nje ganisa inhlangano esebenzayo. Abangane ongakuthumela amathokheni ekhethekile ongazisebenzisa ukuthola izinto ezihlukahlukene futhi okukhona kule game.Make isiqiniseko sokuthi ubangeza futhi unganqikazi ususe lezo angasebenzi ngokwanele. ekugcineni, uzothola kokubili okuqinile, inhlangano esebenzayo nabangane asebenzayo kakhulu.
Thumela Fairies yakho ukwenza ukuthula
Ungakhohlwa ukuthumela Fairies yakho ukuqedela ohambweni ukuze uthole okukhona esengeziwe kanye nemivuzo. Futhi njengoba ukhona, ungakhohlwa ukuphulula nabo njalo imivuzo nakakhulu!
Auto impi ungumngane wakho
Uma ungenalo isikhathi ukudabula izimpi ngokwakho, akufanele ukhathazeke kakhulu njengoba isici auto impi enza ngayo umsebenzi kuhle uma kuziwa esiphatha ohambweni njalo. Ngisho izimpi auto kalula eyadlalwa battler auto, ngakho ngempela kunganciphisa ukuzibandakanya kwakho uma ngakho prefer.However, kukhona ezinye izinto kufanele namanje unake lapho ngokuzenzakalela Battle uyahamba: lokuqala, kufanele wazi ukuthi izinganekwane kungukuthi isebenze ngokuzenzakalelayo, futhi ikhono ekhethekile. Uyoba ngesandla kusebenze labo uma needed.Also, umdlalo ngeke ngokuzenzakalelayo ukushintshela namaqhawe - ngakho uma une-elementi buthaka, kuzodingeka ukuba ushintshele ngesandla (noma uqinisekise ukuthi ukhetha isici kangcono ngaphambi kokuqala kwempi). Lezi zinto azinandaba ukuthi okuningi phakathi lula adventure izimpi, kodwa kufanele namanje unake kubo nje ukuqinisekisa ukuthi yonke into kwenzekani ngohlelo.
Sebenzisa Online Ithuluzi wethu Chofoza inkinobho engezansi
DawnBreak Izici Flaming uMbusi Ithuluzi:
DawnBreak I Flaming uMbusi - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku DawnBreak I Flaming uMbusi inguqulo yakamuva
Khahlela Buddy Hack – Igolide okungenamkhawulo Bucks
Khahlela Buddy aphambe
Shoot kuye ngezibhamu futhi izibhamu, qhumisa amabhomu ngisho uphonsa ibhomu lenuzi! Ake off ezinye umusi kanye ukuqeda yimuphi intukuthelo! Explode, ababhubhise, umlilo, ukudubula, ukumisa imigqa, ukuthumela amandla Gods musa noma ucabange kokumisa! Manje nawe ube arsenal cishe angenamkhawulo: rocket, amabhomu, izibhamu okuzenzakalelayo, sokuhlushwa amathuluzi ... ngisho ibhomu lenuzi! Sethula kini Khahlela Buddy - kungcono okungaphezu nje umdlalo! Ufuna ukukhahlela ngaphezulu? INDLELA ENHLE OF UKUCINDEZELEKA YOKUNIKEZA USIZO! Ngisho noma ungumuntu kuqhathaniswa ukucindezeleka khulula udinga ukushaya off umusi esikhathini esithile noma esinye!
Nge Khahlela yethu Online Buddy Cheat izokwengeza imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Khahlela izici Ithuluzi Buddy:
Khahlela Buddy - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-Kick the Buddy inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Kick the Buddy Hack
Draconius GO Catch Dragon Hack Engeza infinity Zemali
Draconius GO Catch Dragon aphambe
Yakha iqoqo lakho siqu kakhulu amahhashi ezinamaphiko, eyayisekhanda lami, unicorns nezinye izidalwa imilingo. Uma uhambo lwakho futhi izimpi kwakuzophumelela, you ekugcineni bakwazi yokulawula ngisho nezilo aphakeme – the Dragons ka Elements!Wake ngiphuphe yokuniyala Dragons anamandla?Ungazibona yini nawe lwabo. dragon? Kungase kube dragon omkhulu noma drake encane - akekho owaziyo, kusukela zonke izidalwa kule game ziphenduke futhi ushintsho, futhi kuphuma kuwe ukuthi isilwane sakho kuyoba silwanyana cute, isilo okwesabisayo, noma into entsha ngokuphelele. Nguwena omkhulu 125 izidalwa esiyingqayizivele, ngamunye okungaba upgraded.Various umdlalo izenzakalo ukugcina uhambo lwakho fresh futhi okuthakazelisayo· izimfuno avamile kuzokuvumela ukuthola imiqulu ukuze iziphonso ezintsha bese uqala imfuno yakho ukuze Egg Golden!· Portal ezweni Arcana izovula ngawe isici esisha izidalwa, futhi ukukusiza uthole indlela eya uNina Dragons. Kuphela angakwazi amabhu amaqanda lasendulo.· iziphonso Iningi ivuliwe emva uhlamvu yakho ifinyelela izinga 7. Uzokwazi ukuthuthukisa izidalwa zakho noma aphonse izitha zakho aphume enkundleni ngokusebenzisa iziphonso ezinamandla kakhulu, kanye nabangani bakho!· Kusukela ezingeni 9, uzokwazi ukubandakanya nabanye abadlali Duels. Kodwa uzodinga uqiniseke ukuthi ilungiselela kahle.· OMdala Imitapo kuzokuvumela ukushintsha amakhono izidalwa zakho, kodwa ngaphambi ungenza lokho, uzoba ukulwa iqembu obuhlukile.· Watch out for ekuhlaselweni izilo zasendle ngaso sonke isikhathi! Abashadikazi abazowina, kuzolalelwa uthole Runes ngoba iziphonso.· Thola konke bele ngcebo endaweni. Uma ungumuntu lucky ngokwanele, ongasithola kubo zobuciko ukuthi izovula izinketho ezintsha ngoba uhlamvu lwakho.
Nge yethu Online Draconius GO Catch Dragon Cheat izokwengeza imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Enikezwa game izimfuno, izimpi okungahleliwe izilwane, isidlali vs umdlali izimpi, ukuchamisela amaqanda, kuzingelwa ngoba iqanda segolide ekhethekile oqukethe izidalwa ezinamandla, futhi nokuningi!
Draconius GO Catch a izici Ithuluzi Dragon:
Draconius GO Catch Dragon - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Ayikho km edingekayo
Kubuyekeziwe nemisebenzi ku Draconius GO Catch Dragon inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Draconius GO Catch Dragon Hack
Khetha Character Yakho Draconius Go
Ekuqaleni the game uyobe ukhethe igama lomsebenzisi bese uthole ithuba lokukhetha ezinye izici (umbala wezinwele, umbala wamehlo, izingubo ect.) uhlamvu yakho. Uma ukwenza uhlamvu lwakho yinto awunasithakazelo ngempela ukwenza. Ungakhathazeki ungakwazi vele uchofoze isithombe idayisi bese umdlalo ayoyikhetha uhlamvu okungahleliwe ngawe.
Umhlaba Of Draconius Go
Kubuka Draconius Hamba Umhlaba. Izinsika Okuchichimayo, Arena futhi i Obelisk kuyabonakala lapha.
Kulesi screen ungakwazi ukubuka izwe elikuzungezile. Vele ubeke umunwe wakho phezulu uhlamvu kancane spin kuye / wakhe emhlabeni ukubuka izwe elikuzungezile.
Ngesikhathi ngezansi kwesokunxele kwesikrini sakho ungabona uhlamvu lwakho, izinga lakho, kanye isilwane ukuthi baye bakhetha ukuhamba nawe. Uma uchofoza uhlamvu yakho lana uthola oseduze we yakho uhlamvu yakho futhi isilwane sakho. Ungahlola futhi igama lakho lomsebenzisi, XP eziningi kanjani okwengeziwe (isipiliyoni amaphuzu) udinga level up, ibanga wena uhambile kusukela uqale ukudlala Draconius Hamba kanye nosuku uqale ukudlala.
Ngesikhathi ngezansi kwesokudla kwesikrini sakho ungakwazi ukubuka yezidalwa eduze nguwe. Vele uchofoze isidalwa ukuze uthole umbono kangcono lokho izidalwa (kuya ku 9 kuyabonakala lapha) aseduze nawe.
Ngesikhathi isikhungo phansi kwesikrini lapho kubukeka ukuthi ibhola elibomvu ezimise into. Uma uchofoza kuso, kuholela ukuba isihenqo lapho ungakhetha imisebenzi ehlukene efana ngokuvakashela esitolo, ubuka esikhwameni sakho, ngibona lapho izidalwa lenitibambile nokuningi!
Draconius Hamba Game Izici
Kusukela kule ndawo kuhlelo lokusebenza ungakhetha okuyinto isici ongathanda hlola olandelayo.
Ukuchofoza The Red Sphere ku Draconius Go
Uma uchofoza emkhakheni ebomvu maphakathi kwesikrini sakho lokhu lapho iyokuhola.
Duel of Wizards- Lapha kulapho uzothola umdlali vs player inketho.
Ukuthunjwa- Uma uchofoza inkinobho ethumba ungabona zingaki imitapo nokuthi bangaki enkundleni sika ozengezile izilwane. Ngezansi le ungabuka kahle ukuthi izidalwa lapho enkundleni.
izidalwa- Uma uchofoza inkinobho izidalwa uzobona wonke yezidalwa lenitibambile. Ungase futhi ukufinyelela esikrinini amaqanda lapha.
Bestiary– I bestiary kukuvumela ukwazi ukuthi zingaki izinhlobo ezahlukene izidalwa lenitibambile. Njengamanje kukhona 125 kwezinhlobo ezahlukene izidalwa ukuba zibanjwe.
Thenga- I esitolo , kunjalo, lapho ungenza ukuthenga ongathanda. Ungathola zemali ezivela enkundleni e-the game for free. Noma ungakhetha ukusebenzisa imali yangempela futhi uyenze ukuthi ibe zemali ukuthenga.
Quest– Isigaba likuvumela ukuthi ubone ukuthi imfuno njengamanje Udinga ukugcwalisa. Futhi intuthuko yakho maqondana kokuqeda wathi imfuno. Ungase futhi ukufinyelela esikrinini ekuzingeleni lapha.
Magic- Kulesi screen une ukubukwa Runes yakho. Udinga ethile omunye umbala ukuguqula it umbala olandelayo. Uzosebenzisa lezi Runes e isikrini sakho iresiphi ukuthola imivuzo.
isikhwama- Isikrini isikhwama libonisa ukuthi ubuke zonke izinto zakho. Ngaphambi esikhwameni uthuthukise ungakwazi ukubamba 250 izinto ngesikhathi.
Draconius Hamba Isitolo
I Draconius Hamba esitolo lapho ungakwazi ukuthenga izinto esengeziwe uma ufuna. Awusho “kudingeka” ukuthenga lezi zinto ukuze ngidlale ibhola. Nokho, ngokwenza kanjalo kungathuthukisa umdlalo wakho play futhi sikusize level up kusheshe.
Phezulu kwesikrini it uzokutshela bangaki igolide onayo njengamanje. Ngenhla enginakho 305 igolide. Lezi zingosi zingasetshenziselwa noma yiziphi izinto esitolo ukuthi kukhona 305 zemali zegolide noma ngaphansi.
Uma ungafuni ukulinda uhlamvu lwemali yakho stash ukuze zinqwabelane ungakwazi skrolela kakhulu phansi kwesikrini futhi ikunika ithuba turning imali yakho yangempela ku igolide. Ungaqala nge kancane futhi uguqule $1.39 ukuze 100 zemali noma ungakwazi ukuchitha eziningi, $139.99 ngoba 1500 zemali. Njengoba kunezindlela eziningi ngaphezulu phakathi. Ngokuchofoza zemali ufuna ukuthenga uzobona lezinketho zokukhokha.
Draconius Hamba Imivubukulo
I zobuciko kwesigaba ingatholakala endaweni esitolo bese ngokuswayipha ngakwesokudla. 10 zobuciko ezahlukene ingatholakala lapha ezisukela ku intengo 3000 igolide ukuze 5000 igolide.
Dragonplayer sika Isigqoko– +5 placings akude isidalwa ku Arena noma Library ngelanga.
Banner koMbusi– Ivumela wena ukubeka lesinye isidalwa emtatsheni noma enkundleni.
Inhliziyo Dragon sika– Ukunika omunye umfece ngoba UnguNina Dragons ukusebenzisa abophe iqanda lasendulo ngawe.
Buka Zebra-Rabbit sika– Kunciphisa isikhathi lingatshajwa of izinsika 100 imizuzwana.
UMnqobi sika Rod– +2 ezingeni i-Arena noma Library ngemuva kokuthi walithumba.
Ring double– Yengeza esengeziwe 3 nesibalo Arenas ethumba.
Monster Defeater Cup– +80% ukuze udumo ahlangene Arenas futhi Imitapo ngesikhathi soqeqesho.
Totem Umbono wesibili– Ikhipha izidalwa ababuthakathaka kusukela radar.
Grimore seziPhathimandla– Yengeza 105 amaminithi ukufuya Arena ngemva i ubanjiwe ezinye ithimba.
Teddy Dragon– A 40% ukwandisa isivinini ekutholeni umphefumulo amatshe kusukela isilwane sakho.
Draconius Hamba Izinto
Kulesi umbono isikhwama sami Draconius Hamba ongama 250 izinto Ngikusevisi a 196.
Ukwamukela izinto udinga ukuba sendaweni eyamukela Insika Ngokuchichima. I ubude izinsika onsomi uzobona ku yakho ebalazweni umdlalo. Lezi izinsika kuyodingeka azikho izinkinga ekutshela ukuthi uya ngejubane elikhulu spin kubo noma uma ikude spin kubo. Ngakho ukubambezela, futhi usondela.
Uqala nge esiphezulu 200 izinto ukuthi ukwazi ukubona esikhwameni sakho. Nokho, uma ukhetha ungakwazi ukwandisa usayizi wesithombe sakho isikhwama nge 50 izinto 200 igolide. Nasi uhlu ezinye izinto ungamukela in the game.
Sphere sika– Amandla sphere sika ukwazi ukuthola incike izinga lakho. Lezi zisetshenziselwa uthwebule izidalwa.
Lure– Wena beka lezi kunoma iyiphi Insika Ngokuchichima futhi 30 imizuzu izidalwa uzobe bayengelwa ukuba insika ethize.
pheromone– Ukuze 30 imizuzu ungakwazi ukuheha izidalwa kuwe. Lokhu akudingeki ukuthi kusetshenziswe ku insika. Ungakwazi ngisho uhlezi phezu kombhede wakho ukusebenzisa lento.
lokwela– Qaphela lezi njengoba ibiza ngempela ukuthenga. Ngakho asikho ukusaphaza. Uma une zonke 9 izingcezu imephu yakho. Qiniseka ukuthi wena endaweni elungile ngaphambi ekumbeni (imephu ekuzingeleni yakho ncamashi olufana endaweni lapha ujame khonapho. Uma ubheka ibalazwe lakho uzoboniswa kahle ukuthi ucezu lapha ujame khonapho. Sebenzisa lokwela ku ucezu ibalazwe ngamunye (ihlanganisa indawo mayelana 1 km isikwele) uze uthole amaqanda segolide. Ithiphu: Uma une ngqo ibalazwe efanayo umngane ungakwazi bashintshane usebenzisa namafosholo.
Ukwelapha potions– Uma izidalwa zakho eyayilimele seluvuselelekile ukusetshenziswa ephulukisa potions ukuvuseleleka yona impilo egcwele.
avusa Potion– Sebenzisa le Potion ukuvuseleleka isidalwa kwalimala.
Yimpumputhe Dragon sika– Lena ngenye yama-ayithemu engilithandayo kuze kube manje. Ukusebenzisa lento izokubonisa izidalwa wonke imephu. Wena ukwazi ukuchofoza kokubili izidalwa futhi umcebo esifubeni kusukela lapho wena ume. Awudingi ukuba ngokomzimba ukuhambahamba ibalazwe ukuqoqa lezi. Njengabantu abaningi kwamanye lento ihlala 30 Mina futhi imizuzu ukuthole ikunika okuningi izidalwa.
Runes– Bangu 6 imibala ezahlukene Runes ukuthi ukuqoqa kulo mdlalo. Purple kokuba enamandla kakhulu futhi grey kokuba komncane. Lezi Runes ingasetshenziswa zokupheka akunikeza ekhethekile umdlalo ozitholayo. Lezi ozitholayo zinganikezwa nomngane. Nokho, nabo basuke bedinga inani elifanele kanye umbala Runes ukuze usebenzise lesi sici.
Arcana Caramel– Kwandisa amathuba akho yokubamba isidalwa.
yemilingo yedonadi– Kukhulisa inani essence uthola i-ekubambeni isidalwa.
Unicorn sika Marshmallow– Ukuthuliswa izidalwa futhi uthola ukuba nime okwenza kube lula ukuzibamba.
Ice-Cream ka Four Elements– Kwandisa umphefumulo amatshe uthola abadoba isidalwa.
Crystal Yokuhlakanipha– Kabili inani XP uthola i 30 amaminithi.
Cocoon Dragon sika– Une eyodwa umfece engasetshenziswa abophe isamba angenamkhawulo amaqanda. Ungase futhi ukuthenga noma ukuthola kusuka ahlelembe up (izinga 5, 10, 15 njalo njalo) umfece a esiphakade udrako. Lezi umfece sika ingasetshenziswa kuphela 3 izikhathi ngaphambi inyamalala.
Wezinsika hhayi kuphela ukukunika izinto, kodwa ungase futhi beka izicupho kubo. Ngemuva kokuthi uchofoze insika, ungachofoza Ukwengeza inkinobho Lure (kubonakala sengathi isimo banana kumbuthano obomvu) ngaphansi kwesokunxele ekhoneni. Lokhu akukwazi kwenziwe elalikhona ngeshwa.
Wezinsika inikeza ngemilingo. imilingo ngamunye has okuthile okuhlukile ukunikela.
Catching Isidalwa ku Draconius Go
Lesi sithombe umbono emva Sphere am osafunda sika waphonswa ngesikhathi Mymmyween.
Draconius Hamba Enchantment
Ukuze uthole esibukweni Enchantment, umane uvakashela Insika Ngokuchichima futhi chofoza kukho. Uzobe usubona esiyindilinga, obomvu inkinobho ngemigqa kuso phansi ngakwesokunene kwesikrini sakho nge obuthathu amachashazi kuso. Chofoza ke.
Ngemilingo olunikezwayo zingokulandelayo,
Ukuze 300 zemali ungengeza imilingo sphere ukuba insika ukuthola sphere kuwo kuphela.
Ukuze 300 zemali ungengeza ephulukisa potions imilingo ukuba insika abalutholayo kuphela ukuphulukisa potions.
Ukuze 300 zemali ungengeza potions uvuko imilingo ukuba insika ukuthola potions uvuko kuphela.
Ukuze 300 zemali ungengeza imilingo isidalwa amaqanda ukuze insika ukuthola amaqanda kwesilwane. (eziwusizo kakhulu uma ongaphakeme ku amaqanda!)
Ukuze 300 zemali ungengeza awukudla imilingo ukuba insika ukuthola limane nje lilungisa umphumela.
Draconius Hamba Daily Izimpi
Kulesi umbono impi ku Draconius Hamba enginakho 0 izimpi kwabathathu kwesokunxele usuku. Futhi kufanele ulinde okungenani 10 amahora 17 imizuzu empini futhi.
Duel of Wizards ku Draconius Go
I Duel of inketho nabathakathi yilapho uzothola umdlali yakho vs isidlali. Nokho, udinga ukuba okungenani ezingeni 9 ngaphambi kokuthi ukwenza lolu khetho. Lo mdlalo kuzokwenza thatha Umphikisi okungahleliwe ezingeni lelifana nele-ngawe empini. Ungenza lokhu 3 izikhathi ngosuku noma ungakwazi ukwandisa ukuthi lemali 7 izikhathi ngosuku ukuze athole owodwa ngesikhathi 500 zemali.
Uma ulahlekelwa le mpi uzothola lutho futhi kuyodingeka ukuphulukisa nonke ziye zalwa izidalwa zakho. Uma uhlomula uzothola imivuzo futhi ngeke kuphela ukuphulukisa izidalwa esibé alimala empini. Mhlawumbe wena beat zonke izitha zakho izidalwa kuphela eyenu!
Draconius Hamba Izidalwa okuseduze
Kulesi umbono zonke izidalwa anemibala enginakho iqopha phambi isidalwa ukuthi nje isithunzi, Angizange Kusafanele.
On phansi ngakwesobunxele screen sakho main ungakwazi ukubuka yezidalwa eseduze. Uma izidalwa kuthiwa amaKhaladi lokho kusho ukuthi enizithumbe lesi silwane phambi. Nokho, uma isidalwa nje ibonakala zinjengethunzi, kangakanani leso sidalwa entsha ngawe.
Ukuze uthole ukuthi cishe lapho leso sidalwa itholakala. Ungakwazi chofoza kukho bese umdlalo nge uphawu insika ngawe. Isidalwa ukuthi ufuna kube eseduze nale nsika.
Isipina yiNsika Okuchichimayo nokwamukela izinto.
Draconius Hamba Quest
Kulesi umbono Ngidinga uthwebule ngaphezulu isidalwa omunye umhlaba element ngaphambi kokuqeda imfuno nokwamukela umvuzo wami.
Ungathola imfuno kusukela Obelisk. Lokhu ibukeke rocks big nge elikhazimulayo pink endaweni esiqongweni ke. Uma uchofoza ke, ngeke ukukunikeza imfuno. Ezinye izimfuno isikhathi imikhawulo kanti abanye abanalo. Uma ungacabangi ungakwazi ukuqedela quest yakho, vele uvakashele i Obelisk bese ukhetha “ushintsho imfuno”.
Lapho usuqede imfuno unikezwa imivuzo. Futhi ungaqala imfuno entsha.
Draconius Hamba Pet
Kulesi umbono SunTzi kuyinto isilwane sami. Futhi zonke 3 km ngihamba naye, Ngithola candy engasetshenziswa luphenduke amandla phezulu.
Ungakhetha isilwane ukuhamba nawe futhi wamukele umphefumulo amatshe maqondana leso sidalwa (futhi lithuthuka). The pet afanekiselwa lapha owamukela oyedwa itshe umphefumulo ngamunye njalo 3 km wahamba. Qiniseka ukuthi ukhethe isilwane ukuthi udinga eyengeziwe umphefumulo amatshe! Akukho angaqondakali ekuhambeni isilwane ukuthi kujwayelekile futhi kube lula ukufinyelela umphefumulo amatshe.
Buildings Draconius Hamba Ukuthunjwa
Kulesi umbono mina kokuthola 5000 essence 73 igolide nsuku zonke. Futhi kufanele ulinde esinye 7 amahora, 48 amaminithi kanye 35 imizuzwana. Ngaphambi Angikwazi ukuqoqa futhi.
Lesi sici ikuvumela ukubuka bangaki amahora angaphezu izidalwa zakho has wezincwadi ngaphambi kokuthi uphinde uqeqeshe ke kushintshwa ukuthi wathutha.
Ungahlola futhi bangaki Arenas une izidalwa, kangakanani essence uzothola futhi bangaki zemali uzothola lapho ukhona ikwazi ukuqoqa. Ungakwazi eqoqwe cishe kanye ngosuku.
Ngezansi le ikunika uhlu okuyinto zilwane lapho enkundleni.
Draconius Hamba Bestiary
Konke amaKhaladi izidalwa kulokhu kubuka yizo ngiye udliwa ngaphambi kokufa. Isidalwa elivela zinjengethunzi, Ngizibonile kodwa angizange sabanjwa okwamanje. I izikwele izinombolo nje zonke izidalwa ngokuthi ngiye ebezingakabonwa noma ubanjwe.
Okwamanje kukhona 125 izidalwa sikwazi ukubamba. Esikhathini buka Bestiary ungabona izidalwa eziningi kanjani aphume 125 enizithumbe, yibaphi lenitibambile. Futhi uma uchofoza kwabo ungabona zingaki lithuthuka banayo.
Uma lesi silwane sibonisa kuphela kuze zinjengethunzi, lokhu kusho ukuthi zihlangabezane lesi silwane kodwa anizange walithumba.
Ukungeza isidalwa esisha kuya Bestiary. Lesi silwane is njengoba aziwa “Blaze”.
Insika Ngokuchichima lingatshajwa
Kulesi umbono ungabona izidalwa ngaphansi kwesokunxele kuphela isithunzi. Angizange wabanjwa elilodwa ngaphambi. Ngemva ngokuchofoza izidalwa shadow indilinga lebovu ne izinyathelo izovela phezu Insika Ngokuchichima. Lapho lesidalwa.
Draconius Hamba altare
Ungafinyelela altare ngokuchofoza “Magic” inkinobho. Lona lapho ungakwazi ukubuka futhi uguqule Runes yakho. Ukuchofoza zokupheka ungakwazi ukubuka okuyinto Ungadliwa ungenza (inqobo nje uma une isilinganiso esikahle Runes).
Uma une iresiphi, futhi une Runes ungachofoza “ukufaka” ne-altare uzobe usethe indawo yakho. Ungabeka iphasiwedi kule altare uma ufisa. Ngale ndlela kuphela labo wena ukunikeza iphasiwedi zingase zisebenzise lokhu umvuzo nawe. Uma ungafuni iphasiwedi, ubani angasebenzisa ukupela ukuthola imivuzo. Iphasiwedi noma cha namanje, mathupha, bathola zonke izinzuzo ka ukupela yakho ukuze 30 amaminithi.
Draconius Hamba Ungadliwa
Kulesi umbono, ukuze usebenzise i-Gift of Golden Dragon. Kwakuzodingeka ngiqhutshelwe Runes ezimbili oluhlaza futhi omunye orange.
Draconius Hamba Common Amaqanda
Ungaba okungenani 9 amaqanda ezivamile ngesikhathi. Uthola lezi kusuka Wezinsika ukuphotha Ngokuchichima. Iza phambi 2 km, 5 km, futhi 10 km. Uma ufake 2 km iqanda umfece yakho uzodinga ukuhamba 2 km, a 5 km iqanda 5 km kanye 10 km iqanda 10 km. Lapho ziqhubeka ukuthi kudingeka uhambe abophe Iqanda yakho ezingavamile ngaphezulu lesidalwa.
Kuyohlale umfece yakho eyodwa ngoba ukuchamisela amaqanda njengoba has isamba enganqunyelwe yezikhathi ingasetshenziswa. Nokho, esiphakade umfece yakho, njengoba kushiwo ngaphambili, ingasetshenziswa kuphela 3 kaningana ngaphambi kokuba zinyamalale. Uma ukuqoqa wonke imifece yakho noma uthenge ezinye, ungakwazi ukuhamba esisukela 0 ukuze 9 amaqanda ngesikhathi esisodwa.
Ngezansi amaqanda ke ikutshela bangaki km uhambile ukuthi iqanda ethile. Uma isilungile abophe iqanda ngeke vela on screen sakho nge amagama “crack amaqanda”. Wena vele uchofoze “crack amaqanda” futhi wamukele izidalwa zakho. Ngezinye izikhathi ukuthi ayizidalwa entsha nejabulisayo, ngenkathi ezinye izikhathi yiwo usunayo. Bamangala!
Draconius Hamba uNina Dragons In The Rift
Kulesi umbono ungabona ukuthi endaweni nemifantu ezinemibala umbala pink nge umugqa oluhlaza okwesibhakabhaka. Uma uphuma le umngcele ngaphandle kokucindezela “ushiye igebe”, ngeke ubone yimuphi izidalwa noma izinto ezifana Insika Ngokuchichima.
Draconius Hamba Amaqanda Lasendulo
amaqanda sidilizwa nazo etholakele iNsika sika Ngokuchichima. Nokho, lezi amaqanda alikwazi ngomfece abophe. Badinga unikwe “Umama ka Dragon sika”, uzoqhubeka kubo efudumele futhi amabhu zona. Umama ka-Dragons kungatholakala ngokuya ngokusebenzisa portal (akubona bonke inthanethi aqukethe uNina Dragons).
Wena imnike noma 2 ihora, 5 ihora, noma 10 ihora iqanda. Uma 2, 5 noma 10 amahora up “crack amaqanda” isihenqo kuyokwenza pop wena ungakwazi crack Iqanda yakho.
I olukhohlisayo okuyingxenye lapha wukuthi unina Dragons (uyedwa unina Dragons) Ungakwazi amabhu iqanda ngesikhathi ngawe ngaphandle ukuthuthukiswa. Futhi, uma uhamba portal ngenkathi ukuthi ukuchamisela Iqanda yakho Iqanda yakho ingahambi naye. Imane nje iyama. Ngakho ukusiza ukuqinisekisa kukhona isikhathi esanele Iqanda yakho abophe (ikakhulukazi i 10 ihora!), ukusebenzisa i-portal omusha esanda nje kwavela. Noma uthathe gembula futhi sethemba the best.
Draconius Hamba uNina Dragons Ukuchamisela i Egg
Lokhu iqanda manje UnguNina Dragons futhi kuzothatha 2 amahora abophe uma ingxabano alinyakazi.
Draconius Hamba Hunt Map Ukumba Ukuze Egg Golden
Lena igcwaliswe Draconius Hamba ukuzingela imephu. izingcezwana ababili bemba ngenkathi ngifuna iqanda segolide.
Lena igcwaliswe Draconius Hamba ukuzingela imephu. Zonke izingcezwana esithoba kwezo ayisishiyagalolunye baye baqoqa ukuqedela ibalazwe.
Iya i Obelisk (khetha ngokuhlakanipha njengoba ucezu ibalazwe kuyoba ngaphakathi km ezimbalwa lokhu Obelisk). Lapha ungathola ibalazwe ucezu lwakho lokuqala ekuzingeleni yakho. Uyobe kudingeka uvakashele 8 ngaphezulu Obelisk ukuqedela yakho 9 ibalazwe isiqeshana.
Ezinye amabalazwe, endaweni Kulula ukuthola, kuyilapho abanye okwamanje nje ibukeke isikhala esikhulu elingenalutho. Ngakho-ke mhlawumbe engcono kakhulu yokwenza lokhu endaweni nge eziningi imigwaqo liyabonakala.
Khona-ke kufanele athole indawo ukuthi kuboniswa kumephu yakho. Ukuqinisekisa ukuthi wena endaweni kwesokudla sibheke imephu yakho. Uma endaweni kwesokudla kumephu izobonisa ukuthi yiziphi ucezu wena njengamanje kwi.
Uzodinga ukusebenzisa lokwela ku ucezu ibalazwe ngamunye uze uthole amaqanda segolide. Ukuze uthole ezinye izingcezu ibalazwe kudingeka emzimbeni ukuhamba endaweni, uma ubheka ibalazwe lakho ngenkathi Ngokwenza kanjalo uzokwazi ukubona uma baye bathuthela isiqephu esisha noma cha. Uma wena lucky ungase ukuthole Iqanda yakho segolide usebenzisa lokwela lokuqala, noma kungase kuthathe wena zonke eziyisishiyagalolunye.
Njengoba kushiwo ngaphambili, abanye uma ungaba vakashela Obelisk efanayo kuqala njengoba futhi wamukele okufanayo kuqala imephu isiqeshana. Ungabese bashintshane usebenzisa lokwela kumephu. Iqanda segolide kuyoba endaweni efanayo kumephu nonke.
Uma lemephu selisetshenzisiwe you ngalesosikhathi kudingeka ulinde 5 izinsuku ngaphambi kokuqala okunye ukuzingelwa.
Draconius Hamba Imibuzo Futhi Izimpendulo
umbuzo:”Lapho ethola entsha babesuke imitapo, is the wathutha ungcono noma kukubi kakhulu kunaleyo isidalwa ngaphambilini?”
impendulo:”Kuyinto okungahleliwe ngokuphelele kulesi sikhathi. Ungase uthole i-wathutha kangcono, noma ngeshwa, kungenzeka nakakhulu.”
umbuzo:”Kukangaki izidalwa eziyizimbangela uma usebenzisa ama-pheromone?”
impendulo:”Ngithole isidalwa esisha ziyozalela cishe zonke 2 1/2 imizuzu.”
umbuzo:”Ngingalutholaphi zokupheka kusukela?”
impendulo:”Uthola zokupheka kusukela bele nezimfuno kokuqeda.”
umbuzo:”Kwenzekani Iqanda yami uma portal nomama ka Dragons ihamba ngenkathi ukuthi ukuchamisela iqanda?”
impendulo:”Iqanda yakho ngeshwa eyeka ukuchamisela. Nokho, Ngenhlanhla kungaqali phezu at zero. Uzodinga ukuthola uMama Dragons wesibili ukuba alinike Iqanda sidle ukuqedela ukuchamisela.”
umbuzo:”Ingabe eziyizimbangela isidalwa ngesikhathi Insika Ngokuchichima ke lithi ngesikhathi?”
impendulo:”Hhayi ngqo iNsika Okuchichimayo, kodwa endaweni jikelele. Ngivame ukuthole ngaphakathi block noma isiqondiso iNsika Okuchichimayo.”
umbuzo:”Ingabe zonke bano baye Kamama Dragon sika?”
impendulo:”Ayikho, lokhu kubonakala uhlobo okungahleliwe / inhlanhla kanye. Ukuvuleka kwegebe kungenzeka noma akumele ibe uNina Dragons.”
umbuzo:”Ingabe ngidinga zonke izingcezwana ibalazwe ngaphambi simba iqanda segolide?”
impendulo:”Ayikho! Uma wazi endaweni kungcono ngaphandle kokudinga ibalazwe okuphelele, usungaqala yokumba!
umbuzo:”ingxenyana (obomvu noma oluhlaza) Ngifuna ujoyine ayitholakali okwamanje. Ngenzeni?”
impendulo:”I Draconius Hamba Ithimba uncoma ukuthi ulinde it out. Lo mdlalo yakhelwe ukuba silinganisele inombolo wabadlali ku ithimba ngalinye. Ngakho, Ngokwesibonelo, uma abafuna ukujoyina blue ithimba kodwa ayitholakali. Kufanele ulinde kuze kube yilapho abadlali abaningi ujoyine iqembu obomvu. Uma ujoyine iqembu wena AWUKWAZI ukuyiguqula.”
umbuzo:”Ngizwe ukuthi ngezinsuku ezithile zesonto ungakwazi ukubamba izinhlobo ezahlukene izidalwa usebenzisa ama-pheromone. Ingabe ikhona indlela engazi lapho izidalwa kukhona lapho izinsuku?”
NgoMgqibelo nangeSonto- Ishintsha up isonto ngalinye.
umbuzo:”Lapho mina ukubukwa Asikho esinye isidalwa yami ngabona imenyu eyehlayo ebonisa ukuthi kimi imibala ehlukene (oluhlaza, ophuzi, obomvu nomhlophe). Kwenzani lokhu?”
impendulo:”Ungasebenzisa lawa imibala ehlukene ukuhlunga izidalwa yakho ibe izigaba. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukumaka zonke / izidalwa zakho eziqine engcono obomvu. Noma zonke izidalwa ohlela nokuguquguquka oluhlaza. Ukwenza kube lula ukuthola kubo.”
umbuzo:”Ngazi kanjani uma isidalwa yami enhle?”
impendulo:”Lapho ubuka izidalwa zakho uzobona kwesokunxele ke lithi amandla. Lokhu kuyoba inombolo 1-5, 5 iyona engcono kakhulu. Futhi ilungelo izidalwa zakho uzobona impilo, futhi ezisukela 1-5, futhi waphinda 5 iyona engcono kakhulu. Ngakho isidalwa has 5 futhi 5, sibe sihle!
umbuzo: Benzani izinkemba nezihlangu kusho?”
impendulo:”Izinkemba kusho ukuthi izidalwa kuyinto umhlaseli ezinhle, ngenkathi isihlangu kusho kuba welungelo ezinhle.
umbuzo: Yisiphi isici isidalwa muhle ngokumelene okuyinto?
impendulo:”Wind – muhle ngokumelene amanzi kodwa olubi emhlabeni.
Amanzi – muhle ngokumelene umlilo kodwa olubi Arcana.
Umhlaba – muhle ngokumelene Arcana kodwa olubi amanzi.
Umlilo – muhle ngokumelene emhlabeni kodwa olubi emoyeni.
Arcana – muhle ngokumelene umoya kodwa olubi umlilo.
Guns Inkazimulo aphambe Hack- Infinity Igolide VIP Up
Guns ka Ithuluzi Inkazimulo aphambe
Ngo Guns Inkazimulo, wena bahole njengoba Lord liphakama uMbuso iphonswe impi! Ukuze babe umbusi ophakeme sibhudungele Umqhele weSimiselo kusukela Cardinal okhohlisayo, uzoba ziyahlangana kanye edume ezintathu Musketeers, abulale izilo ezinolaka, yakha Castle yakho enhle kakhulu, ubunjiniyela i indiza engenakunqandeka, rally nabangani ukuze abhubhise izitha, futhi nokuningi!EZIPHUMA:isu impi! Qeqesha ibutho Musketeers abaqotho, lawula imithombo yakho, ukwakha izicupho zobuqili raid izitha zakho lwanyamalala, zonke ukuze claim umqhele bese uvula Alliance yakho ibe umbuso sahlulwa!nezindiza Inamandla! Kulesi sikhathi samanje lapho intuthuko abasafufusa kanye nesayensi, adubule phansi izitha phila lokhu kuhlaselwa ngomoya ebulalayo izindiza eziseqophelweni ileveli entsha RTS impi. Uyobonisa kanjani wena ngezifiso siqu wempi wakho flying?neMpi Yezwe! izici wengxoxo Seamless wokuhumusha kwenza RTS kukaGogi yabadlali abaningi kanye RPG Gameplay acebile kunanini ngaphambili - okwenza abangane kusuka kuphi emhlabeni ayikaze kangaka simple.Immersive MMO Umhlaba! Guns Inkazimulo kuletha emhlabeni Three Musketeers ekuphileni abanjengawe angikaze ngimbone it ngaphambi! Emihle elihunyushwe HD ihluzo ocacile, namathafa amahle ukwenza zonke isinyathelo lelisu khulula MMO entwasahlobo ekuphileni!Advanced RTS Combat! Setha isu lakho siqu ukuhlasela izitha kanye nosizo umbimbi! Guns Inkazimulo sika isu MMO Gameplay oluxube RPG kukuvumela ngokwezifiso indiza yakho, bezindlu, amabutho, imishini nokuningi. Ukuthuthukisa isu umdlalo ukuze uvumelane isitayela sakho e uGogi isimangalo ukunqoba!Empire Isakhiwo! Yakha i-Estate ezinezivikelo eziqinile ekhazimulayo, balukhulume uhla amakhono ukuqothulwa ingalo wena nge izikhali asicekeleki ukuqinisekisa ukuphila kwakho nempumelelo kuleli zwe yamasu yabadlali abaningi empini!
Nge Online wethu Guns Inkazimulo Cheat izokwengeza imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Guns izici Ithuluzi Inkazimulo:
Guns Inkazimulo - Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-Guns Inkazimulo inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Guns Inkazimulo Hack
Final Fantasy XV Esisha Empire Hack Engeza Unlimited Gold VIP Lv Up
Final Fantasy XV Esisha Empire aphambe Hack
Ingabe le nsizwa ezinhle siqu Ultimate Inkohliso xv uhambo lwakho ngaphakathi yesimanje iseli indlela isiqophi umdlalo Ultimate Inkohliso xv: A Empire fresh! Thuthukisa siqu umbuso wakho siqu, thola Yingakho ngempumelelo, futhi kuholele ezingeni elithile ndawonye abangane bakho abaseduze! Ingabe omunye ubambe isibindi ukuze bakwazi ukufeza phetho? Quest esebenzisa nemibuso emikhulu, ukuthola imithombo elimangalisayo, futhi ukuthuthukisa ethile Empire engcono ngaphakathi Ultimate Inkohliso esidlule zomlando! Yazi FFXV uhambo lakho siqu siqu efonini yakho yeselula. Thola nezenzo kokuba Noctis, Cindy, futhi zamanje izikhonzi zakho FF15 namaqhawe. Combat nabangani abaseduze futhi kubahlaseli ngaphakathi zimpi adumile abadlala ezingenakubalwa befika bevela kuzo zonke-emhlabeni wonke! Dala phezulu uMbuso futhi Amazing le troopers bakwazi ukuthola ukwenza into yakhe baminyana, real-time zimpi. Yakha Guild enkulu noma mhlawumbe lijoyinane kanye kakade-elinamandla evumela. Hlela kanye inhlangano yakho ukuze bakwazi smash abaphikisana futhi izilwane ngaphakathi real-time zimpi. Ukuncintisana for Gem yakho eduze abadlali okuvela kulo lonke iplanethi.
1. Ukuqala Ukuphayona
• Uzophawula ukuthi ngokushesha nje ushiya embusweni Final Fantasy XV: Esisha Empire, uzoba kakade engamele umbuso omkhulu ezandleni zakho. Qinisekisa ukuthi yonke into ephelele umdlalo ekuqaleni akucele ukuba wenze. Isigaba okokufundisa yomdlalo imayelana abami umdlalo wakho emaphaketheni ngezisetshenziswa ekuqinisekiseni wena level up izakhiwo yakho ngokushesha. Ngenhlanhla, ngeke kudingeke ukhathazeke kakhulu phezu izilo ehlasela nawe ngesikhathi isingeniso sakho ukuze umdlalo. Ihora-24 Empire Barrier uyonikezwa ngeke ugcine uphephile.
2. Joyina Guild
• hook up nge inhlangano kuyimfuneko e Esisha Empire. Izinzuzo bakubheka ngokwakho nge inhlangano kuhlanganisa nokwamukela 100 Igolide nje ukujoyina owodwa, ukukhululeka akhuphula kuqinisa ngoba imfuno yakho izikhathi, izipho kokuthola kusukela amalungu inhlangano nabo, ukuba afinyelele Guild Isitolo abahola Ubuqotho Amaphuzu ngu ekusizeni bezingane njengabasizi bakho. Uma uthola inombolo isaziso obomvu Guild yakho Tab, anakekele lesi sicelo ngokushesha. Leso isicelo kungenzeka othile ecela usizo ngokuqondile kusukela "Usizo Guild" ithebhu. Babasize kusho uzoba ukuthola Ubuqotho ngaphezulu, angasetshenziswa ukuthenga izinto kusuka ku-Isitolo Guild. Ubuqotho ikuvumela ukuba kusebenze VIP yakho Ukubhaliswa, kusheshiswe isikhathi ekupheleni okwesikhathi Hero Quest futhi uvuselele izimfuno ukuze uthole abathandekayo kangcono ngisho ukuqedela. Kunzima hit Ubuqotho umkhawulo Nsuku Guild Usizo kwesigaba, kodwa zama ukushaya ukuthi umgomo noma kunjalo.
3. Qedela Izinhlobo Ezihlukahlukene Izimfuno
• Ukuchofoza Izimfuno ithebhu kuzokuvumela ongakhetha kuzo ezihlukahlukene izimfuno ukuqedela - Empire Izimfuno, hero Izimfuno, Guild Izimfuno VIP Izimfuno. Empire Izimfuno ngokuvamile kuhilelani ukwakhela kanye nokwenza ngcono konke usethe ngaphakathi Empire yakho. abaphukile Hero Izimfuno phansi esinye salezi izinhlobo - Eyisisekelo, Common kanye Kuyivelakancane. Ngamunye wabo kuboshelwe umkhawulo wesikhathi ukuthi kufanele ulinde phandle kuze kube yilapho sekuphelile. Guild Izimfuno angenzi ngendlela efanayo. You can ku izimfuno ezivela esigabeni ngasinye (Empire, hero, Guild kanye VIP), kodwa munye kuphela isigaba kusuka kulesi sigaba (Basic, Common kanye Kuyivelakancane) ngesikhathi.
4. Thatha ku Izimfuno Kunconywe
• Qaphelisisa ukuthi izimfuno ukuthi vela esikrinini lapho oyifunayo phezu umbuso wakho. I izimfuno Kunconywa kungaveli phezu wengxoxo ithebhu global. Lezi izimfuno zihlale Empire Izimfuno, ngakho evunyelwe kubo kusho uzoyiswa ngqo imfuno ususondele. Ukuphelelisa it is kushelele kusukela uzothola khulula Speed ​​Up ukuthi ungakwazi esetshenziswa ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthole. Ngakho kungenzeka ukuthi uzothola uthuthukise ton kwamabhilidi wakho yamazinga aphezulu phakathi usuku lwakho 1st nge umdlalo.
5. Yokucwaninga Yakho & Qinisa Umbutho lakho ngesikhathi Training Grounds
• University yakho main ihabhu endaweni for beqhuba ngcono lokucwaninga umbuso wakho. ucwaningo yakho singasetshenziswa izigaba ezine ezihlukene - Economics, Combat, YezokuVikela Hero. Ngasinye salezi zici ezine ukudlala omkhulu ingxenye ekusizeni ukugcina umbuso wakho uphephile. Ngokwesibonelo, ngcono Hero Tab kukuvumela cwaninga izinto ezifana Monster Amaqhinga. Leli khono unika Hero yakho ithuba ukuze aphebeze Level 1 izidalwa out Ebalazweni Kombuso. Konje, qiniseka iqhawe bakho igcinwa isesimweni ithiphu phezulu ngokuchofoza Hero iphrofayela ubuso ithebhu phezulu kwesokunxele kwesikrini sakho. I-AP usutholile ekupheleliseni Hero Izimfuno kusiza uvule amakhono amasha ngoba iqhawe lakho lamanje.
• I Training Grounds nakanjani omunye izinqaba ungafuna ukugxila imizamo yakho ngcono ku. Elingcono Training Ground kusho uzothola zokuthuthukisa up Training emugqeni wakho futhi ukubophela kuze iphesenti Training Speed. Uzothola ukuqeqesha eyodwa lixuku ngesikhathi. abaphukile Labo izinhlobo lixuku phansi Warriors, mages, Cavalry futhi Siege Izinjini. Nalu lixuku uhlobo amandla / ishadi ubuthakathaka ukuwohloka:
- Warriors aqinileko Cavalry futhi Siege Izinjini, kodwa ababuthakathaka ngokumelene mages futhi Izicupho
- mages ninamandla ngokumelene Warriors futhi Siege Izinjini, kodwa ababuthakathaka ngokumelene Cavalry futhi Izicupho
- Cavalry ninamandla ngokumelene mages futhi Siege Izinjini, kodwa ababuthakathaka ngokumelene Warriors futhi Izicupho
- Siege Izinjini ninamandla ngokumelene Izicupho, kodwa ababuthakathaka ngokumelene Warriors, Cavalry kanye mages
6. Qinisekani Wena Ukuqoqa Zonke Kuqediwe Empire Quest Imivuzo Yakho
• NjengoMariya ngike ngasho ngaphambili, izimfuno letiphakanyisiwe bathambekele unamathele Empire Izimfuno. Ukuphelelisa kubo kusho uzokhokhiswa inhlakanipho amathani izinsiza, ngakho-ke qiniseka uyazi uma beku kwenziwe. Zonke izimpahla ubutha yikutsheyelela ukuphuma kweqembu Empire Izimfuno singasetshenziswa maqondana ukwenza isakhiwo ngcono nakakhulu. Izakhiwo ungathuthukisa kuhlanganisa yakho:
- Wall (kusiza ukuvikela ipherimitha Empire yakho yangaphandle)
- Hero Isikhumbuzo (uyozuza Inani eyengeziwe kanye nokugcina ngaphezulu kusukela Hero wadingiswa)
- I-embasi (izindlu azowalekelela kusukela Guild yakho exhunyiwe)
- INqabayokulinda (inikeza ulwazi mayelana nokuhlasela engenayo nokunye okuningi)
- Isibhedlela (kusiza endlini kwalimala amasosha)
- Isibhedlela Lesigceme (kwandisa inani lamasosha ungakwazi ukuphulukisa kanyekanye)
- Bank (yakha Gil futhi kwandisa Gil umthamo)
- Barracks (kokuba ekamu amaningi kwandisa Training emugqeni we-Zokuqeqesha yakho Grounds)
- ngokudingiswa Portal (uzokwazi ukuthola kuqinisa uma sisusa i Hero isitha)
- Ejele (ikuvumela ukuba abambe futhi ubambe Heroes isitha)
- Imfihlo University
- Treasury (thuthukisa Citadel yakho ukuze Ileveli 5 lokuqala; ikuvumela ukuba lifake Gold)
- Inyuvesi (ubheke enika #5)
- Citadel (ubheke ithiphu elandelayo ukuze ufunde kabanzi mayelana nalesi sakhiwo)
- Training Grounds / Special Training Grounds (ubheke enika #5)
- Nihlola Grounds (enkundleni ekhethekile imiklomelo kuwe bebulala minsters)
- Armoury / Advanced Armoury (kukuvumela sokucaba igiya ukuze Hero wakho)
7. Qinisekani Wena Level Up Citadel Yakho
• I Citadel kungenye isakhiwo Uber-kubalulekile ukuthi kukunika umbiko sezizonke zokukhiqiza ukuqhubeka umbuso wakho nokuthuthukiswa. Ahlelembe up Citadel yakho kusho ukukhiqiza i-Energy yakho, Metal, Ukudla Gil kuyothuthuka ngokuhamba kwesikhathi. Ithuthukisa Citadel yakho futhi likuvumela ukuvula izakhiwo ezintsha ngawe ukubeka emhlabeni umbuso wakho, plus uzoba cishe uthole isipho noma ezimbili ngemizamo yenu.
8. Open Up Izipho Zakho Imfihlo
• Bona ukuthi esifubeni elintantayo ngaphezu Kunconywa imfuno ithebhu? Kulapho Izipho zakho Imfihlo amanga. Ngemva kokuvula kubo, uzoba ulinde ngenkathi ngaphambi kokuthi sithathe ezinye imivuzo entsha. Njalo gcina iso close on kwalelo bhokisi ngoba ongangena ubunikazi extra Speed ​​Up lento.
9. Iba VIP
• Uma uthola ngokwanele Ubuqotho amaphuzu, ukuchitha kubo on VIP yakho Ukubhaliswa kusebenze. Ungaba isimo VIP for kwamaminithi ambalwa noma ngisho usuku lonke. Uma isebenze, ungathatha ku VIP Izimfuno futhi uthole umvuzo ngisho enkulu. Ubuqotho lwemali Ungengeza futhi amaphuzu VIP izinga lakho (ezingeni max kuyinto 11). Imivuzo VIP ezingeni 1 kukhona:
- Instant Ukwakhiwa Speed ​​Up: 7-amaminithi
- Ukudla Ukuvikelwa: +4-amaphesenti
- VIP Quest Ibhonasi: +1
- VIP e Iphrofayela yesidlali futhi uxoxe
10. Xhuma i-akhawunti yakho Facebook
• Uma une-wokuhlola ukuthi ubani odlala le game ifana fiend, ubacela ukuba yokudlulisela. Ngaleyondlela, ongayithola yingcebo imivuzo ngokwenza ukuthi nokuxhuma umdlalo ku-akhawunti yakho ye-Facebook. Ngaphandle yokudluliselwa, usengakwazi ukuxhuma ku-Facebook bese uhola ehlukile umvuzo - ukufinyelela yakho siqu Imayini yegolide. Ukwakha akho Imayini yegolide kukunika amandla nokwenza ngaphezulu nabangani bakho be-Facebook ne-isipho / ukuthola Gold.
Nge yethu Online Final Fantasy XV Esisha Empire Cheat izokwengeza imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Final Fantasy XV Esisha Empire Ithuluzi izici:
Final Fantasy XV Esisha Empire- Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku-Fantasy XV Esisha Empire inguqulo yakamuva Final
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Final Fantasy XV Esisha Empire Hack
Dunk Nation 3x3 Hack Thola Infinity Gems futhi Zemali
Dunk Nation 3x3 aphambe Hack
I wabadlali abaningi kakhulu imisebenzi umugqa ezemidlalo umdlalo inthanethi kanye kanye nemifanekiso imfashini. Kuyoba inesikhala kalula, Arcade uhlobo ukuhumusha ezihambisana cishe ingxenye inkantolo ezitaladini ibhola, self-ngenxa yokuthi asele Hip-Hop. Umdlalo jikelele uqokomisa ezitaladini langempela golf ball umphelelisi phakathi buddies. ifomu le-hip hop ezintathu isithombe ntathu, iculo ethize kuqalile ngemigwaqo, zama ukwenza noma yiluphi ucingo zingaphenduka umgwaqo golf ball amaphesenti amahlanu inkantolo (umgwaqo golf ball endaweni). amakhono ahlukahlukene freestyle, Kuningi izingubo eziningana kanye egqokenayo yini okufanele ngamunye ngokwezifiso ubuntu langempela kanye siveze imizwa. Umsebenzi Model：Akha phi indaba indaba siqu. umphelelisi Design: Prakthiza ngokusebenzisa buddies, kuthuthukiswe siqu mpi amakhono akho. Isinyathelo isitebhisi Model：Ukuze ubuhle uqobo leqembu, ahole umkhakha langempela. Real-time Fight: Reveal amakhono akho elilawulayo, ukwenza kanye buddies kanye nezitha ngokusebenzisa nje mayelana konke mayelana iplanethi. 5 Imisebenzi Wakhululwa ukuze Khetha: Nje ngakho konke 5 imisebenzi avame ukuba lutholakale kalula ukuze ukhethe，real-time ukubambisana Tactical ngokuphathelene nabalingani ukuze afeze enkazimulweni. Yenza Isakhiwo kwakho komuntu siqu: Kuningi izingubo ehlukile kanye izinto egqokenayo ukuze ngamunye ngokwezifiso sibalo langempela kanye umbukiso wedwa! Yakha lakho siqu Regal Group: Zonke indawo owunikelayo kungeyakho isici esiphawuleka kanye ezingaphezu kuka 20 basketballer Imiphumela angase ogunyaziwe ngaphakathi khetha ukuze ivumelane eziningi umdlalo abathanda kanye nezidingo ehlukile.
Nge yethu Online Dunk Nation 3x3 Cheat izokwengeza imithombo angenamkhawulo ku-akhawunti yakho.
Dunk Nation 3x3 Ithuluzi izici:
Dunk Nation 3X3- Online ithuluzi, Asikho isidingo sokulanda!
Kubuyekeziwe futhi isebenza ku Dunk Nation 3x3 inguqulo yakamuva
Ngokuphawulekayo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye Dunk Nation 3x3 Hack
ikhasi 1 ikhasi 2 … ikhasi 12 ikhasi elilandelayo